एक महिनामै २३.१९ प्रतिशतले बढ्यो चाँदीको गहना निर्यात, १९ करोडबढीको बाहिरिँदा कुन देशमा कति पुग्यो ? - Arthatantra.com
एक महिनामै २३.१९ प्रतिशतले बढ्यो चाँदीको गहना निर्यात, १९ करोडबढीको बाहिरिँदा कुन देशमा कति पुग्यो ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ९ महिनामा नेपालबाट १९ करोड १३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बराबरका चाँदीका गहना निर्यात भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चैतमसान्तसम्मको तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो ।
एक महिनामै २३.१९ प्रतिशतले चाँदीको गहना निर्यात बढेको हो । चालु आवको फागुनमसान्तसम्म १५ करोड ५३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको गहना निर्यात भएको विभागले जनाएको छ ।
विदेशीमा बन्न नसक्ने नेपाली मौलिक गर–गहना नेपालबाट निर्यात हुने गरेको छ । अहिले नेपालबाट विश्वका विभिन्न एक दर्जनभन्दा बढी मुलुकहरुमा चाँदीका गहना निर्यात हुने गरेको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
तथ्याङ्क अनुसार अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान, बेल्जियम, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, हङकङ, नेदरल्याण्ड पोर्चुगल, सिंगापुर, स्वीटजरल्याण्ड, ताइवान लगायतका देशहरुमा निर्यात हुने गरेको छ ।
विभागका अनुसार पछिल्लो समयमा नेपालीहरुको बसोबास बढी भएका मुलुकहरुमा गहना निर्यात हुने गरेको छ । विशेषगरि ति देशहरुमा नेपाली मौलिक गरगहनाको निर्यात भएको हो ।
नेपालबाट सबैभन्दा बढी अमेरिका निर्यात भएको छ । चैतमसान्तसम्म अमेरिकामा १२ करोड २३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बराबरका चाँदीका गहना निर्यात भएको विभागले जनाएको छ ।
त्यस्तै,अष्ट्रेलियमा १ करोड ३४ लाख ५२ हजार, जापानमा १ करोड २६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ ।फ्रान्समा ८१ लाख ७७ हजार, नेदरल्याण्डमा ७६ लाख ५४ हजार, जर्मनीमा ५७ लाख ८७ हजार, स्वीटजरल्याण्डमा ४३ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको चाँदीका गहना निर्यात भएको छ ।
विभागको तथ्याङ्क अनुसार बेलालयतमा २३ लाख ४ हजार, रसियनमा २३ लाख १ हजार, ताइवान चीन प्रान्तमा १३ लाख ४५ हजार, क्यानडामा १२ लाख ६५ हजार, पोर्चुगलमा ४ लाख ८५ हजार, बेल्जियम २ लाख ७० हजार, इटलीमा १ लाख २९ हजार, हङ्कङ १ लाख १७ हजार, सिंगापुरमा १ लाख रुपैयाँ बराबरको चाँदीका गहना निर्यात भएको विभागले जनाएको छ ।
वि.सं.२०७८ वैशाख १६ बिहीवार १७:५५ मा प्रकाशित
अघिल्लाे भोलिदेखि सीईडीबी हाइड्रोपावरको २५ करोड १८ लाख कित्ता आईपीओ आउँदै, कति दिने आवेदन ?
पछिल्लाे सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक कार्यालयमा डिजिटल लिड डिस्प्ले जडान